မမေ့ေ့ မှတျစု (၂) ကလေးနှငျ့ ဖွညျ့စှကျစာ
ဖွညျ့စှကျစာဆိုသညျမှာ ကလေးကွီးထားလာသညျနှငျ့အမြှ မိခငျနို့တဈခုထဲနှငျ့ မလုံလောကျတော့ဘဲ ခန်တာကိုယျလိုအပျခကျြအရ အာဟာရမြှတအောငျ အစားအသောကျပုံစံပွောငျးခွငျးဖွဈပါသညျ
ဖွညျ့စှကျစာကို စနဈတကြ ကြှေးပါက မိမိရငျသှေးလေး၏ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှုကို အထောကျအကူပေးနိုငျမညျ ဖွဈသညျ၊ ဖွညျ့စှကျစာ စနဈတကြ မကြှေးပါက
ကလေး ညှကျခွငျး၊ အာဟာရခြို့တဲ့ ခွငျးဖွဈတတျပါသညျ
ဖွညျ့စှကျစာ ကြှေးနစေဉျလညျး မိခငျနို့ကို ကလေးအသျ ၂နှဈအထိ တိုကိကြှေးရပါမညျ။
ကလေးအသကျ ၆လတှငျ စတငျကြှေးနိုငျသညျ။ ကလေးအသကျ ၆ လမတိုငျခငျ မကြှေးသငျ့ပါ၊ ကလေး၏ အစာအိမျအူလမျးကွောငျး အသငျ့ မဖွဈသေးခငျတှငျ မိခငျနို့တဈမြိုးသာ တိုကျသငျ့ပါသညျ။
အစားအစားမြားသညျ ကလေးအသကျပျေါမူတညျ၍ ကှာခွားပါသညျ။ ကလေး အသကျ ၆လမှ ၈လ အထိ မိခငျနို့ကို ဆကျလကျတိုကျကြှေးရပါမညျ။
ပုံမှနျခကျြသော ထမငျးကို ဇှနျးကွီးတဈဇှနျးခနျ့ယူ၍ ရထေပျထညျ့၍ ပွုတျပါ။ ထို့နောကျ ကွိတျထားသော(သို့) ထောငျးထားသော ပဲနီလေး အမှုနျ့၊ဆီ တဈဇှနျးထညျ့၍ ဆူအောငျတညျပါ၊ အာဟာရပွညျ့ဝသော ဆနျပွုတျကို ကလေးအား စားပှဲတငျဇှနျး ၂ ဇှနျးခနျ့ တဈနေ့ ၂ကွိမျ ကြှေးနိုငျပါသညျ။
ကလေး အသကျ ၈လ မှ ၁၂လ ထိ ထမငျး ခပျပြော့ပြော့ကို ဆီ၊ ကွကျဥ(သို့) နူးနသေော အသား(သို့) ငါး နှငျ့ ပဲတို့ကိုရော၍ ကလေးအားကြှေးနိုငျပါသညျ
ပါးပါးလှီးထားသော အရှကျ တို့ကို လညျး ထညျ့ကြှေးနိုငျပါသညျ။
ပြော့အောငျခွထေားသော သရကျသီး၊ငှကျပြောသီး၊ သင်ျဘောသီးတို့ကို လညျးအဆာပွေ အနနှေငျ့ကြှေးနိုငျပါသညျ။
နို့တိုကျနသေော ကလေးမြားအတှကျ တဈနလြေှ့ငျ ၃ကွိမျ၊ နို့ မတိုကျတော့သော ကလေးမြားအတှကျ တဈနလြေှ့ငျ ၅ကွိမျ ကြှေးနိုငျသညျ။
ကလေးအသကျ ၂ နှဈအထိ မိခငျနို့ခြို တိုကျကြှေးရနျလိုအပျပါသညျ။ ဤ အရှယျတှငျမူ မိသားစုခကျြသညျ့ ဟငျးထမငျးအတိုငျး ကလေးအားကြှေူးနိုငျပါသညျ
တဈနလြေှ့ငျ ၃နပျ ကြှေး၍ ကွားတှငျ အဆာပွေ ကြှေူးနိုငျပါသညျ။
အဆာပွေ အာဟာရ ဖွဈအောငျ မညျသညျမြားကြှေးနိုငျသနညျး?
ကနျစှနျးဥပွုတျ၊ ကွကျဥပွုတျ၊ မွပေဲပွုတျ မြား၊ သနျ့ရှငျးလတျဆကျသော ရာသီပျေါအသီးအနှံမြားကြှေးနိုငျပါသညျ။
မေ့မေ့ မှတ်စု (၂) ကလေးနှင့် ဖြည့်စွက်စာ
ဖြည့်စွက်စာဆိုသည်မှာ ကလေးကြီးထားလာသည်နှင့်အမျှ မိခင်နို့တစ်ခုထဲနှင့် မလုံလောက်တော့ဘဲ ခန္တာကိုယ်လိုအပ်ချက်အရ အာဟာရမျှတအောင် အစားအသောက်ပုံစံပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်
ဖြည့်စွက်စာကို စနစ်တကျ ကျွေးပါက မိမိရင်သွေးလေး၏ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုကို အထောက်အကူပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်၊ ဖြည့်စွက်စာ စနစ်တကျ မကျွေးပါက
ကလေး ညှက်ခြင်း၊ အာဟာရချို့တဲ့ ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်
ဖြည့်စွက်စာ ကျွေးနေစဉ်လည်း မိခင်နို့ကို ကလေးအသ် ၂နှစ်အထိ တိုကိကျွေးရပါမည်။
ကလေးအသက် ၆လတွင် စတင်ကျွေးနိုင်သည်။ ကလေးအသက် ၆ လမတိုင်ခင် မကျွေးသင့်ပါ၊ ကလေး၏ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်း အသင့် မဖြစ်သေးခင်တွင် မိခင်နို့တစ်မျိုးသာ တိုက်သင့်ပါသည်။
အစားအစားများသည် ကလေးအသက်ပေါ်မူတည်၍ ကွာခြားပါသည်။ ကလေး အသက် ၆လမှ ၈လ အထိ မိခင်နို့ကို ဆက်လက်တိုက်ကျွေးရပါမည်။
ပုံမှန်ချက်သော ထမင်းကို ဇွန်းကြီးတစ်ဇွန်းခန့်ယူ၍ ရေထပ်ထည့်၍ ပြုတ်ပါ။ ထို့နောက် ကြိတ်ထားသော(သို့) ထောင်းထားသော ပဲနီလေး အမှုန့်၊ဆီ တစ်ဇွန်းထည့်၍ ဆူအောင်တည်ပါ၊ အာဟာရပြည့်ဝသော ဆန်ပြုတ်ကို ကလေးအား စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်းခန့် တစ်နေ့ ၂ကြိမ် ကျွေးနိုင်ပါသည်။
ကလေး အသက် ၈လ မှ ၁၂လ ထိ ထမင်း ခပ်ပျော့ပျော့ကို ဆီ၊ ကြက်ဥ(သို့) နူးနေသော အသား(သို့) ငါး နှင့် ပဲတို့ကိုရော၍ ကလေးအားကျွေးနိုင်ပါသည်
ပါးပါးလှီးထားသော အရွက် တို့ကို လည်း ထည့်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
ပျော့အောင်ခြေထားသော သရက်သီး၊ငှက်ပျောသီး၊ သင်္ဘောသီးတို့ကို လည်းအဆာပြေ အနေနှင့်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
နို့တိုက်နေသော ကလေးများအတွက် တစ်နေ့လျှင် ၃ကြိမ်၊ နို့ မတိုက်တော့သော ကလေးများအတွက် တစ်နေ့လျှင် ၅ကြိမ် ကျွေးနိုင်သည်။
ကလေးအသက် ၂ နှစ်အထိ မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤ အရွယ်တွင်မူ မိသားစုချက်သည့် ဟင်းထမင်းအတိုင်း ကလေးအားကျွေူးနိုင်ပါသည်
တစ်နေ့လျှင် ၃နပ် ကျွေး၍ ကြားတွင် အဆာပြေ ကျွေူးနိုင်ပါသည်။
အဆာပြေ အာဟာရ ဖြစ်အောင် မည်သည်များကျွေးနိုင်သနည်း?
ကန်စွန်းဥပြုတ်၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ မြေပဲပြုတ် များ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆက်သော ရာသီပေါ်အသီးအနှံများကျွေးနိုင်ပါသည်။